No. 2063, Sunday, February 17, 2019 | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Issue » No. 2063, Sunday, February 17, 2019
၁၃၈၀ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၃ ရက် (တနင်္ဂနွေ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၉)
ပြည်ပသို့ တရားမ၀င် စေလွှတ်ရန် အလုပ်သမားစုဆောင်း၊ ငွေကြေးကောက်ခံသူ ၁၃၀ ကျော်ကို အရေးယူ
ပြည်ပသို့ တရားမ၀င် စေလွှတ်ရန် အလုပ်သမားစု ဆောင်းခြင်း၊ ငွေကြေးကောက်ခံ ခြင်းများ ပြုလုပ်သူ ၁၃၀ ကျော်ကို အရေးယူထားကြောင်း အလုပ် သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
အမြန်လမ်းတွင် ယာဉ်တိမ်းမှောက်ပြီး သံဃာတစ်ပါးပျံလွန်၊ လူတစ်ဦးသေဆုံး
နေပြည်တော်-မန္တလေး အမြန်လမ်းတွင် ကိုယ်ပိုင်ယာဉ် တစ်စီးလမ်းဘေးမြောင်းအတွင်း ပြုတ်ကျတိမ်းမှောက်ကာ သံဃာ တော်တစ်ပါးပျံလွန်ကာ အမျိုးသမီးတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။
အောက်တန်းအသင်းများထံ ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၄၀၀ ရောက်ရှိရေး ဖီဖာပစ်မှတ်ထား
ဇူးရစ် − ဖီဖာ၏ ကစားသမားအ ပြောင်းအရွှေ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု များဖြင့် အောက်တန်းအသင်း များထံ ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၄၀၀ အထိ ရောက်ရှိရေး ကမ္ဘာ့ဘော လုံးအဖွဲ့ချုပ် ဖီဖာက ပစ်မှတ်ထား နေသည်။
လီဗာပူးနှင့်ပွဲတွင် ဘိုင်ယန်မြူးနစ် တောင်ပံကစားသမား ကိုမန် ပါဝင်ကစားနိုင်
မြူးနစ် - ခြေချင်းဝတ် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သဖြင့် စိုးရိမ်ခဲ့သော်လည်း တောင်ပံကစားသမား ကင်ခလီ ကိုမန်သည် လီဗာပူးနှင့်ပွဲတွင် ပါ ဝင်နိုင်မည်ဟု ဘိုင်ယန်မြူးနစ်က အတည်ပြုပြောကြားသည်။
တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲများကို လျစ်လျူရှုမထားရန် အစိုးရနှင့် တပ်မတော်အား SNLD တောင်းဆို
အစိုးရနှင့် တပ်မတော် အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားအချင်း ချင်းအကြား ဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲများကို လျစ်လျူရှုမထား ဘဲ ၀င်ရောက်ဖြေရှင်းပေးရန် ရှမ်း တိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအ ဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ ဦးစိုင်းလိတ်ကတောင်းဆို သည်။
စစ်တွေမြို့တွင် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုပြီး ရန်ကုန်မြို့သို့ ခရီးသည် တင်အမြန်ယာဉ်ရှစ်စီးဖြင့်ပြန် ကြွလာသည့် သံဃာအပါး ၃၀၀ ကို ပြည်မြို့၌ ဒေသအာဏာပိုင် များက စစ်ဆေးပြီးနောက်စစ်မှန် သဖြင့် ပြန်ကြွစေခဲ့ကြောင်း ယင်းမြို့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် ပြည်သူ့အင်
မန္တလေးတိုင်းအတွင်း ကမ်းပြိုကာကွယ်ရေးနှင့် ရေလမ်းကြောင်းကောင်းမွန်ရေး လုပ်ငန်းများ စတင်
မန္တလေးတိုင်းဒေသ ကြီးအတွင်း ကမ်းပြိုကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်း ၁၅ ခုနှင့် နေရာလေးခု ရှိ ရေလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဖေဖော်ဝါရီ ပထ မပတ်က စတင်ဆောင်ရွက်နေ ကြောင်း ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ် ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦး စီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဟုမ္မလင်းတွင် ခရီးသည်တင် ယာဉ်တစ်စီး တိမ်းမှောက်၍ ကိုးဦးဒဏ်ရာရ
ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်တွင် ခရီး သည်တင်ယာဉ်တစ်စီး အရှိန်မ ထိန်းနိုင်ဘဲ တိမ်းမှောက်၍ ခရီး သည်ကိုးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ ကြောင်း ဟုမ္မလင်း မြို့မရဲစခန်း မှူး ဒုရဲမှူးကြည်စိုးက ပြောသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေး ထောက်ခံကြိုဆိုပွဲ နတ်တလင်းမြို့တွင် ပြုလုပ်
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲရန် ထောက် ခံကြိုဆိုပွဲ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး နတ်တလင်းမြို့၌ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
တိုက်ပွဲများကြောင့် စာမေးပွဲဖြေရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သူများကို ပြန်လည်ဖြေဆိုခွင့်ပေးမည်
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု များကြောင့် စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ရသည့် ကျောက် တော်မြို့နယ် ချောင်းတူကျေးရွာ မှ ကျောင်းသား ၂၅ ဦးကို စတုတ္ထ တန်းနှင့် အဋ္ဌမတန်းစာမေးပွဲစစ် ဆေးသည့်အခါ ပြန်လည်ဖြေဆို ခွင့်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်း ကျေးရွာမှ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဦး
မတ်ပဲနှင့် ပဲစင်းငုံအဝယ် ရပ်ဆိုင်းပြီး တစ်လအတွင်း နှစ် နိုင်ငံသဘောတူညီမှုဖြင့် ပဲရောင်း ချရေး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရန် အိန္ဒိယ နိုင်ငံသို့ ဖေဖော်ဝါရီတတိယပတ် တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့ သွားရန်
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီသာ ပြင်ဆင်ရန် ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆန္ဒဖော်ထုတ်
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကို ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်း နှင့်အညီသာ ပြင်ဆင်ရန် တပ် မတော်ထောက်ခံသူများနှင့် အမျိုး သားရေးလှုပ်ရှားသူဟုဆိုသူ အင် အား ၅၀၀ ကျော်က ယမန်နေ့ တွင် မြို့တော်ခန်းမရှေ့၌ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာ ရော်ဘာကုန်ကြမ်း ဈေးမြင့်လာခြင်းက ပြည်တွင်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအတွက် မျှော်လင့်ချက်ကောင်းဖြစ်လာ
အမေရိကန်-တရုတ် ကုန်သွယ်ရေး ဆွေးနွေးပွဲ စတင် ချိန်တွင် ကမ္ဘာ့ရော်ဘာကုန်ကြမ်း ဈေး အနည်းငယ်တက်လာခြင်း က မြန်မာနိုင်ငံမှ ရော်ဘာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအတွက် မျှော် လင့်ချက်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာ သည်ဟု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အချို့က ပြောသည်။
ကျပ်သိန်း ၁၅,၀၀၀ ထီလက်မှတ်၏ ပြင်ပပေါက်ဈေး ကျပ်သိန်း ၁၆,၅၀၀ ခန့်အထိ ရှိဟုဆို
ကျပ်သိန်း ၁၅,၀၀၀ ထီလက်မှတ်သည် ကျပ်သိန်း ၁၆,၅၀၀ ခန့်အထိပေါက်ဈေးရှိနေကြောင်း ထီလက်မှတ်ရောင်း ၀ယ်ရေးလုပ်ကိုင်နေသူအချို့က ပြောသည်။
အိုင်စီစီအဖွဲ့ဝင်များ အချက်အလက် ရယူရန် မတ်လဆန်းတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့သွားရောက်မည်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်မှုခုံရုံး(အိုင် စီစီ)တွင် ပိုမိုပါဝင်လာကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးအတွင်းဝန် မက်ရှာ ဟီဒူလ်ဟက်က ပြောသည်။
တနင်္သာရီတိုင်း စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးအား ထောက်ခံကြောင်းလက်မှတ်များ လိုက်ကောက်နေဟုဆို
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးအား ပြည်သူများက ထောက်ခံကြောင်း လက်မှတ်များကို မြိတ်မြို့တွင် ရပ်ကျေးရာအိမ်မှူးများက တစ်အိမ်တက်၊ တစ်အိမ်ဆင်း ကောက်ခံနေကြောင်း မြိတ်မြို့ ဒေသခံများက ပြောသည်။
စမတ်လက်ပတ်နာရီ၊ ဘောပင်၊ မျက်မှန်များ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲခန်းသို့ ယူလာပါက နှစ်အကန့်အသတ်မရှိ ဖြေဆိုခွင့်ပိတ်မည့်ပြစ်ဒဏ်သစ် သတ်မှတ်
စမတ်လက်ပတ်နာရီ၊ ဘောပင်၊ မျက်မှန်တို့ကို တက္က သိုလ်ဝင်စာမေးပွဲခန်းသို့ ယူလာ ပါက နှစ်အကန့်အသတ်မရှိစာ မေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ပိတ်မည့်ပြစ်ဒဏ် အသစ်ကို မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီး ဌာနက ယခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာ မေးပွဲစည်းကမ်းချက်များတွင် ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ခဲ့သည်။
လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီ ဒေါ်လာသန်း ၆၀ ကို အမေရိကန်အစိုးရက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ ထပ်မံထောက်ပံ့
အမေရိကန်ပြည်ထောင် စုသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရှိ ကုလ သမဂ္ဂပူးပေါင်းတုံ့ပြန်ရေးအစီအ စဉ်တွင် လူသားချင်းစာနာထောက် ထားမှုအကူအညီအဖြစ် ကန် ဒေါ်လာသန်း ၆၀ ထပ်မံထောက်ပံ့ မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်၌ ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်။
တပ်ချုပ်နှင့် နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌတို့ ကချင်စစ်ဘေးရှောင်များ နေရပ်ပြန်နိုင်ရေးဆွေးနွေး
တပ်မတော်ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်း အောင်လှိုင်နှင့် နိပွန်ဖောင်ဒေး ရှင်းဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာရိုဟေးဆာဆာ ကာဝါတို့တွေ့ဆုံပြီး ကချင်စစ် ဘေးရှောင်ပြည်သူများ နေရပ်ပြန် နိုင်ရေး ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
တနင်္သာရီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့သည် ပြည်သူကျေနပ်မှုအနည်းဆုံး အစိုးရဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသ ကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ပြည်သူ ကျေနပ်မှုအနည်းဆုံးအစိုးရအဖွဲ့ ဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရသဖြင့် လေး လေးနက်နက်သတိပေးလိုပြီး အ မှန်တကယ်အလုပ်မလုပ်ပါက ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုင်တွယ်မည် ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သတိပေးပြောကြားသည်။
.ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ဘောလုံးကလပ်ပိုင်ရှင် ၁၀ ဦးစာရင်းကို နယူးယောက်ရဒ်ဘူးလ်အသင်းပိုင်ရှင် ဒိုင်ယက်ရစ်ခ်ျ မာတီရှခ်က ဦးဆောင်ထားပြီး ၎င်း၏နောက်တွင် မန်စီးတီးပိုင်ရှင် ရှိတ်ခ်မန်ဆာ၊ ဂျူဗင်တပ်ပိုင်ရှင် အန်ဒရီယာအဂနီလီ၊ အယ်လ်အေဂလက်စီပိုင်ရှင် ဖီးလစ်အန်ရှုဇ်၊ ချယ်လ်ဆီးပိုင်ရှင် ရိုမန်အီဘရာမိုဗစ်ခ်ျနှင့် အာဆင် နယ်ပိုင်ရှင်စတန်ကိုရီယန်တီတို့ ရှိနေသည်။
အဝါကတ်ထိအောင် တမင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဆိုသော ရာမို့စ်၏ ဖြစ်ရပ်ကို ယူအီးအက်ဖ်အေ စုံစမ်းနေ
အေဂျက်ဇ်ကို ၂-၁ ဂိုးဖြင့် နိုင်သောပွဲတွင် အဝါကတ် ပြသခံရစေရန် တမင်တကာ လုပ်ခဲ့သည်ဆိုသော ရီးရဲလ်အ သင်းခေါင်းဆောင် ရာမို့စ်၏ပြော ဆိုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဥရောပ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ယူအီးအက်ဖ် အေက ယင်းဖြစ်ရပ်ကို စုံစမ်းစစ် ဆေးနေသည်။
အရေးကြီးကာလ ရင်ဆိုင်ရန် အသင့်ရှိဟု ဂျူဗင်တပ်နည်းပြပြောကြား
နည်းပြအယ်လီဂရီ၏ ဂျူဗင်တပ်သည် ဖရိုဆင်နွန်း သုံး ဂိုးပြတ်အနိုင်ရပြီးနောက် စီးရီး အေအမှတ်ပေးဇယား၌ ၁၄ မှတ် ဖြတ်ကာ ဦးဆောင်ခဲ့ပြီးအက် သလက်တီကိုမက်ဒရစ်နှင့်ကစား မည့် ချန်ပီယံလိဂ် (၁၆) သင်းအ ဆင့် ရှုံးထွက်ပထမအကျော့အ တွက် ယုံကြည်မှု တိုးလာသည်။
မန်ယူတိုက်စစ်မှူး လင်းဂတ်နှင့် မာရှယ် ဒဏ်ရာကြောင့် သုံးပတ်ကြာ အနားယူရဖွယ်ရှိ
မန်ယူတိုက်စစ်မှူးများ ဖြစ်သည့် လင်းဂတ်နှင့်မာရှယ် သည် သုံးပတ်ကြာ အနားယူ ရဖွယ်ရှိသည်။
သင့်ကလေးကို သင်ကြားနေသော ဆရာ၊ ဆရာမသည် သင်ကြား မှုတွင် အတော်ဆုံးဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် သင့်ကလေးအကြောင်းကို အကြောင်းစုံမသိပေ။ ထို့ကြောင့် သင့်ကလေးကျောင်းတွင် အကောင်း ဆုံး သင်ယူနိုင်ရန် ဆရာမသိထားသင့်သော အချက်များကို သင်ကပြော ပြထားရမည်ဖြစ်သည်။ မိဘနှင့်ဆရာ လက်တွဲဆောင်ရွက်ပါက ကလေး၏ စွမ်းဆောင် ရည်အမြင့်ဆုံး ရရှိနိုင်ပြီး စာသင်နှစ်စတင်ချိန်တွင် ဆရာမကို သင့်ကလေးအကြောင်း ပြောပြရန် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့် Google တွင် မြန်မာစာရေးသားရာနှင့်ဖတ် ရှုရာ၌ ကြုံတွေ့နေရသည့် အဆင်မပြေမှုများ မကြာမီ ပြေလည်မည် ဖြစ်ကြောင်း Technomation ကုမ္ပဏီစီအီးအို ဦးထူးမြင့်နောင်က ပြောသည်။ လက်ရှိ၌ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့် Google သည် ကွန်ရက်ပေါ်တွင် ရေးသားထားသည့် မြန်မာစာစနစ်ကို Update ပြုလုပ်နေသဖြင့် မြန်မာစာစနစ်ကို ဖတ်ရှုရာနှင့် ရေးသားရာတွင် အဆင်မပြေမှုများ ကြုံတွေ့နေရသည်ဟု MyanmarNet ကုမ္ပဏီ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးဇော်ထွဋ်ကပြောသည်။
ကြံ့ခိုင်မှုနည်းပြီး အ၀လွန်သော ဆယ်ကျော်သက်များ ပြင်းထန်ရောဂါများ ဖြစ်ပွားနိုင်
ကြံ့ခိုင်မှုမပြည့်ဝသော (သို့မဟုတ်) အ၀လွန်ဖြစ်နေသော ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်များသည် အရွယ်ရောက်ချိန်တွင် ပြင်းထန်သောရောဂါများနှင့် မသန်မစွမ်းဖြစ်နိုင်သော အန္တရာယ်မြင့်မားကြောင်း ဆွီဒင်သုတေသီများ၏ လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ သိရသည်။
အီးယူက မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အား လေ့ကျင့်သင်ကြားနေမှုများ ရပ်တန့်ရန် ဗြိတိန်အခြေစိုက်အဖွဲ့ တောင်းဆို
ဥရောပသမဂ္ဂ(အီးယူ) က မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အား လေ့ကျင့်သင်ကြားနေမှုများကို ရပ်တန့်ရန် ဗြိတိန်အခြေစိုက် Bur-ma Campaign UK က ယမန်နေ့တွင် တောင်းဆိုသည်။